बीच सडकमा कपडा उतार्ने अभिनेत्री श्री रेड्डीले भनिन्–सुपरस्टारले मसँग..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बीच सडकमा कपडा उतार्ने अभिनेत्री श्री रेड्डीले भनिन्–सुपरस्टारले मसँग...
डिसी नेपाल , २३ जेठ २०७६
मुम्बई।गत वर्ष बीच सडकमा टपलेस भएर कास्टिङ काउच विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने अभिनेत्री श्री रेड्डी लगातार चर्चामा आएकी थिइन्। उनले दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगका केही कलाकारमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी थिइन्। श्री रेड्डी समाजिक संजालमा निकै सक्रिय रहन्छिन्। पछिल्लो समय उनी सामाजिक संजालमा आफूलाई लागेको कुरा स्पष्टसँग लेख्छिन्। यही कारण उनी फेरि चर्चामा छिन्।
लामो समयपछि श्री रेड्डी फेरि एक पटक आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किएकी छन्। यो पटक उनले एक जना चर्चित सेलिब्रिटीमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। जसका कारण उनी चर्चामा पनि छिन्। उनले निर्देशक तेजा विरुद्ध नकारात्मक पोस्ट गरिरहेकी छन्। तेजा श्री रेड्डीका नजिकका साथी पनि थिए।
तेजाले श्री रेड्डीलाई ‘एनटीआर’ को बायोपिकमा एउटा भूमिकाको अफर गरेका थिए। त्यसपछि श्री रेड्डीले फिल्मको लञ्चमा भाग लिइन्। तर कारणवश तेजा यो प्रोजेक्टबाट बाहिरिए र उनले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘सीता’ मा श्री रेड्डीलाई अवसर दिएनन्।
आफूले फिल्ममा भूमिका नपाएपछि श्री रेड्डीले आफ्नो फेसबुकको टाइमलाइनमा एक पोस्ट शेयर गरेकी छन्। जसमा उनले तेजामाथि दुव्र्यवाहर गरेको आरोप लगाएकी छन्। उक्त पोस्टमा कमेन्टको वर्षा लागेको छ।